12-30-2010 04:36 AM #11
&ufpufygay hAsm..... ..... &ifxJ eifhceJyJ.. /
tpfudka&.. yHkawGu tpfudk hrlydkifjzpfwJh twGuf tpfudk hbavmhfcfemrnf 'grSr[kwf trSwftom;.. 'grSr[kwf MMCP qdkwmudk uef hvef hjzwfuav; jzpfjzpf a&pm oabmrsdK;av; xnfh ay;&if ydkaumif;r,f/ olrsm;rlydkifudk av;pm;ovdk udk,fh rlydkifcGifhudkvJ umuG,fvdkufovdk jzpfatmifyg..
abya, aprilcold, badinf, Bae Lu Wa, cohtet, eilay, fridayborn, jokershan, KLM, KM Wai, Ko Khant, kokogyi76, kosatsu, koshwemung, mokenlay, mrlynn, nelayne, Peacock D. NgaPyae, RunAtServer, sai naw, thatonthu, ttaswo, Winnermann, YuNge, zero6
12-30-2010 04:47 AM #12
ဒီသရက်မှာ အချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုကို ဦးစားပေးချင်လို့ ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့တဲ့နေရာတွေကိုသာ ပြန်ဝေမျှတာများပါတယ်။ အခြား သတင်းဌာန ၊ ဆိုက် ၊ ဘလော့ တွေကနေကူးယူဖော်ပြရင်လည်း ဓာတ်ပုံမူပိုင်ခွင့်တို့ဘာတို့ကလည်းရှိသေးတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ကျုပစ်ဖိုရမ် စည်းကမ်းအတိုင်းလုပ်တာက နောက်ကြောင်းအေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါမျိုးကိုစိတ်ဝင်တစားမှတ်တမ်းတင်တဲ့လူ ၊ အချိန်ပေးပြီးလိုက်လုပ်တဲ့လူ နည်းမယ်ထင်တာဘဲ။ ဒါကြောင့် ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဗီအိုအေ သတင်းဌာနမှာတက်လာခဲ့သော် ဒီသရက်မှာ ပြန်လည်ဖော်ပြခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ။ ( ခုမှခွင့်တောင်း မိတယ် ရှေ့မှာလုပ်ပြီးရက်သားဖြစ်နေတယ်
ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် ဆုံးရှုံးမှု ရခိုင်အမျိုးသမီးများ အစည်းအရုံး UNESCO ကို တိုင်ကြား
By ဦးကျော်ထင် တနင်္လာ, 27 ဒီဇင်ဘာ 2010
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မြောက်ဦးမြို့နယ်က ရှေးဟောင်း သမိုင်းဝင် နေရာတွေကို ဖြတ်သန်းဖောက်လုပ်မယ့် ရထားလမ်းဟာ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမယ့် အခြေအနေ ဖြစ်တာမို့ ဒါတွေကို တားဆီးပေးဖို့ ပြည်ပအခြေစိုက် ရခိုင်အမျိုးသမီးများ အစည်းအရုံးက UNESCO ကို မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို စုံစမ်းထားတဲ့ ဗွီအိုအေ ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် ကိုကျော်ထင်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မြောက်ဦးမြို့နယ်ကို ဖြတ်သန်းမယ့် မင်းဘူး၊ အမ်း၊ စစ်တွေ ရထားလမ်းဟာ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်တွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမယ့် အခြေအနေ ရှိနေတာမို့ ကုလသမဂ္ဂ ပညာရေး၊ သိပ္ပံနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ (UNESCO) က ဒါတွေကို တားဆီးပေးဖို့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် အခြေစိုက် ရခိုင်အမျိုးသမီးများ အစည်းအရုံးက ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့မှာ မေတ္တာရပ်ခံလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းက မြောက်ဦးမြို့ခံတွေက ရှေးဟောင်းသုတေသန ဦးစီးဌာနကို တင်ပြ တောင်းဆိုမှုကြောင့် ပျက်စီးသွားတဲ့ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ် တချို့ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးဖို့၊ ရထားလမ်းကို လမ်းကြောင်း အနည်းငယ်ပြောင်းဖို့ သဘောတူခဲ့တာကြောင့် ယာယီ ပြေလည်မှု ရခဲ့ပါတယ်။
လမ်းကြောင်းပြောင်းတယ် ဆိုပေမဲ့ ဒီလလယ်ပိုင်းမှာ ရခိုင်ရှေးဟောင်းမြို့တော် ဓည၀တီမြို့ဟောင်းကို ဖြတ်ပြီး ဖောက်လုပ်နေတာကြောင့် ဒေသခံတွေက ဆက်လက် ကန့်ကွက်နေကြတာပါ။
နန်းမြို့ရိုး၊ အုတ်တံတိုင်းတွေ ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ ဓည၀တီနဲ့ ဝေသာလီ မြို့ဟောင်းတွေကို ဖြတ်ပြီးဖောက်မှာမို့ ဒါတွေကို တားဆီးပေးဖို့ UNESCO သို့ မေတ္တာရပ်ခံတာ ဖြစ်တယ်လို့ ရခိုင်အမျိုးသမီးများ အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းက ပြောပါတယ်။
“ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တွေဟာ လူမျိုးတမျိုး တာရှည်တည်တံ့ဖို့ရာအတွက် အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ အရာတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒီအဆောက်အဦးတွေကို ဖျက်ဆီးနေတယ်၊ ဆက်တိုက်လည်း ဖျက်ဆီးနေတယ်။ အခုဆို ဓည၀တီမြို့ဟောင်းကို ရောက်လာပြီ။ နောက်ဆို ဝေသာလီကို ရောက်တော့မယ်၊ စသည်အားဖြင့် လုပ်နေတာကို အတတ်နိုင်ဆုံး တားဆီး ကာကွယ်ပေးပါ ဆိုပြီး ကျမတို့အနေနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံထားပါတယ်။”
မကြာသေးခင်နှစ်တွေက နိုင်ငံအနှံ့ ကြက်ဆူပင်တွေ စိုက်စဉ်ကလည်း မြောက်ဦးက နန်းတော်ရာဟောင်းမှာ ကြက်ဆူပင်တွေ စိုက်တာကြောင့် ကန့်ကွက်ပြောဆိုမှုတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းတွေဟာ လူမျိုးတမျိုးရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ကို မထိပါးဖို့ လိုတယ်လို့ ဒေါ်စောမြရာဇာလင်းက ဆက်ပြောပါတယ်။
“ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို လုပ်မယ် ဆိုရင်လည်း မြို့ဟောင်းနေရာတွေကို ဖြတ်ပြီးတော့မှ၊ ဘုရားစေတီရှိတဲ့ နေရာတွေကို ဖြတ်ပြီး လုပ်ဖို့ မသင့်ပါဘူး။ တခြားနေရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ မကြာသေးခင်ကလည်း မင်းပြားမြို့နယ်မှာ စေတီတွေကို ဖျက်ပြီး လမ်းဖောက်တာတွေ ရှိတယ်။ ဒီလို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေကို မလုပ်သင့်ဘူး။
“သူတို့ ပုဂံမှာဆိုရင် ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်တွေကို ကာကွယ်နေတာ အများကြီးပဲ။ ဒါပေမဲ့ ရခိုင်ပြည်မှာကျတော့ ဒီလို ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်တွေကို ဖျက်ဆီးလာတယ် ဆိုတာကျတော့ ကျမတို့ရင်ထဲမှာ ခံစားချက် မကောင်းဘူး။ ကျမတို့ လူထုတွေ တရပ်လုံးကတော့ အသက်နဲ့ရင်းပြီး ဒီဟာတွေကို ကာကွယ်ရလိမ့်မယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။”
ဒီလဆန်းပိုင်းကလည်း အမေရိကန် အခြေစိုက် နိုင်ငံတကာ ရခိုင်အသင်းက ဒီကိစ္စအပေါ် UNESCO က ကြားဝင်ပေးဖို့ အကြောင်းကြားခဲ့ပါသေးတယ်။ အလားတူပဲ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား တိုးတက်ရေး ပါတီကလည်း ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေကို ရှောင်ကွင်းပြီး ဖောက်လုပ်ဖို့ အာဏာပိုင်တွေကို တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
UNESCO ဟာ မြောက်ဦး ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု နယ်ပယ်ကို ကမ္ဘာ့အမွေနှစ်များ စာရင်းထဲမှာ ၁၉၉၆ ခုနှစ်က ထည့်သွင်းခဲ့တာကြောင့် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်အရ အကာအကွယ် ပေးသင့်တယ်လို့လည်း ရခိုင်လူမျိုးတွေက ယုံကြည်နေကြပါတယ်။
abya, academy, aprilcold, badinf, Bae Lu Wa, cohtet, fridayborn, happyvalley, jokershan, KLM, KM Wai, Ko Khant, kokogyi76, koshwemung, Mini_Me, mokenlay, MrYoDa, nelayne, orjawlan, Peacock D. NgaPyae, RunAtServer, sai naw, ttaswo, winekyaw, Winnermann, yarthiudu, YuNge, zero6
12-30-2010 04:55 AM #13
ဘုရားထဲမှာ ခင်ဗျ ၊ ဂူဘုရားဆိုတော့ ဘုရားဆင်းတုရှေ့တည့်တည့်မှာ အဓိကဝင်ပေါက် ၊ ဘေးနှစ်ဘက်မှာက အရွယ်ပိုသေးတဲ့ ဝင်ပေါက် နှစ်ခုရှိသယ်။ အဲဒိဝင်ပေါက်ကို ပိတ်ပြီး အဲတာတွေ ဆင်ထားတာဗျ ၊ ဘုရားဝတ်ပြုဖို့ ဂူထဲဝင်တော့ ကျနော့ကို ကြူးကျော်သူတစ်ယောက်လိုတောင်ကြည့်သေးတယ်။
mmcp ကပိုအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ဖြင့် ဘာမူပိုင်ခွင့်မှမလိုချင်ပါ။ mmcp လို့သာတပ်ပရစေဗျာ၊ ကျေးဇူးပါ။
Last edited by mrlynn; 12-30-2010 at 05:30 AM.
abya, aprilcold, badinf, Bae Lu Wa, cohtet, eilay, fridayborn, happyvalley, jokershan, KLM, Ko Khant, kokogyi76, koshwemung, mokenlay, MrYoDa, nelayne, orjawlan, RunAtServer, sai naw, Shadowstriker, solidsnake, thatonthu, ttaswo, Winnermann, YuNge, ZAM, zero6
01-03-2011 03:25 PM #14
ဖိုးပေါ်ဘုရား အနီးမှာ မောင်ကုလားဘုရားကိုတွေ့တယ်။ ပန္နပုံ ၊ အင်္ဂတေ ကနုတ်ပန်း ၊ စေတီရံ အားလုံးနီးပါး လက်ရာတူဖြစ်တယ်။ ဂူဘုရားအဓိကဝင်ပေါက် အမိုးခုံး တဘက်မှာမင်စာမှတ်တမ်းရေးထားတာတွေ့ရတယ်။ ဦးမြင့်အောင်၊ ဒေါက်တာသန်းထွန်းတို့ရဲ့စာတမ်းတွေအပါဝင် ပြည်ပစာအုပ်အတော်များများမှာ မောင်ကုလားဘုရားဆေးရေးပန်းချီတွေ အကြောင်း ဖတ်ဖူးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဂူဘုရားအတွင်းနံရံပေါ်မှာ ဥရောပတိုက်သားပုံအတော်များများရေးဆွဲထားတာမို့ ပိုပြီးနာမည်ကြီးလူသိများစေတာဖြစ်တယ်။ ၁၈၂၅ ခုနှစ်လောက်ကရေးတဲ့ လက်ရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် (သမိုင်းထဲက ဒီဇိုင်း ၊ ဒေါက်တာသန်းထွန်း ၊ စာ ၆၁ )။ ယခုအချိန်အထိ ရှာတွေ့တဲ့ ဂူဘုရားတွေထဲမှာ ဥရောပတိုက်သားပုံ အများဆုံးရေးခဲ့တဲ့ ဂူဘုရားဖြစ်နေတယ်။ အဓိက အဝင်မုဂ်ဦးရဲ့ ဘယ်ဘက် နံရံက ဥရောပတိုက်သားပုံဟာ ဒတ်ခ်ျအမျိုးသားဖြစ်တယ်၊ ပေါ်တူဂီအမျိုးသားဖြစ်တယ်၊ တချို့က ပြင်သစ် ၊ တချို့က အင်္ဂလိပ်ဆိုပြီးအမျိုးမျိုး ပြောနေဆဲဖြစ်တယ်။ ဘယ်ဟာမှအသေချာပြောလို့မရနိုင်လို့ ငြင်းခုန်မှု သက်သက်ဖြစ်နေတယ်။ နံရံဆေးရေးအများစုဟာ ၅၅၀ ဇာတ်နိပါတ်တော်တွေထဲက ကောက်နှုတ်ချက်တွေကို ပုံဖော်ထားတာများတယ်။
စူဋ္ဌာနီတပ်သားတွေဥပကာရီမြို့ကို ဝိုင်းပြီးစစ်တိုက်ရာမှာ ဥရောပတိုက်သား အမြောက်တပ်သား ၊ မြင်းစီးတပ်သားတွေကို ထည့်ဆွဲထားလို့ စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်တယ်။ အခြားဇာတ်နိပါတ်တော်တွေမှာပါတဲ့ တိုက်ပွဲပုံတွေမှာလည်းဘဲ ဥရောပတိုက်သား စစ်သားတွထည့်ဆွဲထားပါသေးတယ်။ အချို့ပန်းချီတွေမှာတော့ ဥရောပတိုက်သား စစ်သည်တွေကို နှစ်ဘက်စလုံးမှာ ထည့်ဆွဲထားတာတွေ့တယ်။ ပန်းချီအောက်မှာရေးထားတဲ့ ဇာတ်နိပါတ်တော်အမည်ကောင်းကောင်းဖတ်မရလို့ ဘာဇာတ်မှန်းမပြောနိုင်သေးပါ။ မြန်မာဘုရင်တွေဟာ နိုင်ငံခြားသား ကြေးစားစစ်သားတွေကို စစ်တိုက်ရာမှာငှားသုံးရမှန်း အနည်းဆုံး ၁၄-၁၅ ရာစုနှစ်လောက်ကတည်းကသိပြီးဖြစ်ပေမယ့် ခုလိုပန်းချီတွေထဲထည့်ဆွဲတာ တွေ့ရခဲတယ်။
ဆေးရေးပန်းချီ ရေးဆွဲတဲ့အခါ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်းတွေက
၁။ ဆေးဒန်း - အဝါရောင်
၂။ ဟင်္သပဒါး - ချိပ်နု ၊ ချိပ်ရင့်ရောင်
၃။ ဆုန် ( ခဲမပုပ် ) - အနီရင့်
၄။ မြေဖြူ - အဖြူရောင်
၅။ ကွေ့ - ချိပ်နု ၊ ချိပ်ရင့် ( ထုံးကျောက် ၊ မြေစေး ၊ နီဝါ )
၆။ ချိပ် - သစ်စေးနီနီ
၇။ ကံကုတ် - အမည်းရောင် ( နာ ၊ ခဲပုပ်မည်း )
အစိမ်းရောင် ၊ အပြာရောင် ရလောင် လိုသလိုစပ်ပြီးသုံးတယ်။ ဆေးခြယ်တဲ့ အခါ ၊ နံရံမှာကပ်တဲ့ အင်္ဂတေ ခိုင်မာတဲ့အထိ ၊ ခြောက်သွေ့တဲ့အထိ စောင့်ဆိုင်းရပါတယ်။
၁။ တစ်ကြောင်းဆွဲ - မျက်နှာထားမြင်ရင် စိတ်ထားကိုမြင်အောင် ဆွဲကြပါတယ်။
၂။ ဟန်ပြ - လူကို ရှေ့မှာထားပြီး တူအောင်ရေးဆွဲပါတယ်။ (သမိုင်းထဲက ဒီဇိုင်း ၊ ဒေါက်တာသန်းထွန်း ၊ စာ ၁၉၆ )
ဒီနေရာမှာကြုံးတုန်းပြောချင်တာက မြန်မာပညာရှင်တွေထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေ ပုံထည့်သွင်းဖော်ပြမှုအားနည်းတယ်။ နံရံဆေးရေးဟာ ဘယ်လိုသရုပ်ဖော်ထားတယ်၊ ဘယ်လိုနည်းပညာအသုံးပြုတယ် ၊ ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်၊ လှတယ်၊ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ် စသဖြင့်ရေးသွားလိုက်တာ စာမျက်နှာ နှစ်မျက်နှာလောက်ရှိတယ်။ သို့သော်ပုံက ပါမလာ။ အဲဒိတော့ စိတ်ကူးနဲ့သာပုံဖော်ရတယ်။ တကယ့် ဆေးရေးကိုမမြင်ရ။ ဖတ်လို့သာပြီးသွားတယ် မှတ်ညာဏ်ထဲကျန်ခဲ့လေ့မရှိ။ အဲဒိမှာ မြန်မာစာအုပ်နဲ့ နိုင်ငံခြားက စာအုပ်အတော်လေးကွာခြားသွားတယ်။ နိုင်ငံရပ်ခြား စာအုပ်တွေမှာတော့ ပုံကို အလေးပေးဖော်ပြတယ် ၊ ရှူထောင့်မျိုးစုံက ဓာတ်ပုံရိုက်ပြတယ် ၊ ပြီးတော့မှ ဒီပစ္စည်းနဲ့ပါတ်သက်ပြီး မှန်ကန်တိကျတဲ့အခြေခံအချက်လက် အနည်းငယ်ကိုချရေးပြထားတယ်။ ဒီတော့ စာဖတ်သူဟာ သာမန်ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါစေ ရှေးလက်ရာဆိုတာ ဒီလိုပါလားဆိုပြီး ပုံနဲ့စာတွဲပြီး မှတ်ဉာဏ်ထဲစွဲကျန်နေခဲ့တယ်။ ဝါသနာရှင် ၊ သုတေသနပညာရှင်တို့အတွက်တော့ ဆက်ပြီးလေ့လာဖို့ အတိုင်းမသိအဖိုးတန်အချက်လက်တွေပါဘဲ။ မြန်မာစာအုပ်တွေကဖြင့် ပေးချင်တဲ့အချက်လက်ကို ပွတ်သိပ်ထည့်ပြီးရေးတာများတယ်။ လူငယ်တွေ သမိုင်း နှင့် ရှေးဟောင်းသုတေသနကို စိတ်ဝင်စားလာအောင် လုပ်ရာမှာ ဒီနည်းက အလုပ်မဖြစ်တော့ပါ။ ဟိုတုန်းက ရှေးလူကြီးတွေကပြောတယ် " နှုတ်တစ်ရာ စာတစ်လုံး " တဲ့၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနမှာတော့ " စာတစ်ထောင် ပုံတစ်ပုံ " လို့ပြောရလောက်အောင် တာသွားတယ်လို့ ဆိုချင်တယ်။
ခုလို ရှေးလက်ရာတွေပျက်စီးရတဲ့အဓိကအကျောင်းရင်းကတော့ ဂူဘူရားကိုယ်ထည်အတွင်းပိုင်းကို ရေစိမ့်ဝင်ပြီး ဆေးရေးတွေရှိတဲ့ အင်္ဂတေနံရံတွေကွာကျပျက်စီးတာမျိုးအတွေ့ရများတယ်။ စတင်တည်ဆောက်စဉ် ပုံစံထုတ်သူ ဗိသုကာပညာရှင်တွေရဲ့ နည်းစနစ် နှင့် နည်းပညာကွာခြားမှု၊ ဘုရားတည်ဆောက်သူ ပန်းရန်ဆရာနှင့်လုပ်သားတွေရဲ့ လက်ရာ (Workmanship) ၊တည်ဆောက်ရာမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်း စတာတွေဟာ အဆောက်ဦးရဲ့ ရေရည်တည်တံ့မှုပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်။ စတင်တည်ဆောက်စဉ်အချိန်က နိုင်ငံရေး နှင့် စီးပွါးရေး အခြေနေဟာလည်းဘဲ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်ပြီး အကျိုးစီးပွါးဖြစ်ထွန်းတဲ့အချိန်မှာ လှူတန်းလေ့ရှိပေမယ့် တည်ဆောက်မှုမပြီးမှီ နိုင်ငံရေး(ဒေသတွင်း လုံခြုံရေး) ၊ စီးပွါးရေး မတည်မငြိမ်ဖြစ်လာတဲ့အခါ အဆောက်ဦးတည်ဆောက်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ လက်ရာညံ့သွားတတ်တယ်။ အထူးသဖြင့် ၁၃-၁၄ ရာစုလက်ရာ ၊ ၁၈ ရာစု လက်ရာ နှင့် ၁၉ ရာစုအစောပိုင်းလက်ရာ အဆောက်ဦးတွေမှာ တွေ့ရလေ့ရှိတယ်။ ပထဝီဝင်အနေထားနှင့် ရာသီဥတု ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ငလျှင်နှင့် မြေသားရွေ့လျားမှု စတာတွေဟာလည်းဘဲ အဆောက်ဦးရေရှည်တည်တန့်မှုကို အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့အတွက် ချန်ထားလို့မရပါ။ ခုပြောခဲ့တာတွေအားလုံးဟာ ဟိုတစ်ချိန်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေနေ နှင့် သဘာဝတရားပေါ်မှာသာမူတည်ပြီး ထိန်းချုပ်ဖို့ လက်လှမ်းမှီမယ်မဟုတ်ပါ။
ရှေးလက်ရာတွေ ပျက်စီးရတဲ့အခြားအကြောင်းရာတွေရှိပါသေးတယ်။ ပါဝင်တဲ့လူတွေက ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင် ၊ ဝါသနာရှင် ၊ ဘုရားခိုး သိုက်သမား၊ ဘုရားဂေါပက၊ စေတနာရှင် ရဟန်းရှင်လူ ၊ ခရီးသွားဘုရားဖူး၊ ဘုရားအနီးနားမှာနေပြီး အသက်မွေးဝမ်းပြုသူ စသဖြင့် လူတွေရဲ့အပြူမူကြောင့် ပျက်စီးရတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ ယခု မောင်ကုလားဘုရားမှာတော့ အထက်ပါအကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပျက်စီးယိုယွင်းလာတဲ့ အဆောက်ဦးကို ရှေးဟောင်းသုတေသနကဖြစ်စေ စေတရာရှင် ရဟန်းရှင်လူကဖြစ်စေ ရံဖန်ရံခါပြုပြင်တာမျိုးလုပ်ရင်း ဖျက်ဆီးမိရက်သားဖြစ်တာ များမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျိုးပျက်သွားတဲ့ နေရာတွေမှာ ပြုပြင်မှုလုပ်တဲ့အခါ သာမန်အစားထိုးပြုပြင်လုပ်သော်လည်း မူလရှေးလက်ရာအတိုင်း ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပြုပြင်တာမျိုးမဟုတ်ပါ။ ဥပမာပြောရရင် ကွာကျသွားတဲ့ အင်္ဂတေနံရံနေရာကို သာမန်အင်္ဂတေပြန်ကိုင်တာမျိုးသာလုပ်ထားတယ်။ နံရံတွေဆက်ပြီးပြိုမကျအောင် ထိမ်းထားနိုင်လို့ အဲလိုလုပ်တာမကောင်းဘူးလို့တော့ပြောမရပါ။ သို့သော် အသေးစိတ် ဂရုတစိုက်မလုပ်တဲ့အခါ ဘေးကအကောင်းတိုင်းကျန်နေသေးတဲ့ လက်ရာတွေကို ဖျက်ဆီးမိရက်သားဖြစ်တတ်နေတတ်တယ်။
' ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ပန်းချီကာများ မဖျက်ဆီးရ ' ဆိုတဲ့စာတမ်းကို အဝင်ဝမှာတင်တွေ့တယ်။ အဲဒိစာတမ်းရေးထားတဲ့နံရံမှာကို ဟိုတချိန်က ဆေးရေးတွေရှိခဲ့မှာအမှန်ဘဲ။ ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနက မောင်ကုလားဘုရားဝင်ပေါက်ကို သံတံခါးတပ်ပြီး သော့ပိတ်ထားတယ်။ အလကားနေရင်း လက်ဆော့တတ်တဲ့ တို့မြန်မာတွေအတွက် ဒီလိုသော့ပိတ်ထားတာဘဲကောင်းပါလိမ့်မယ်။ နို့မို့ဆို ရေးထားတဲ့ ရှေးလက်ရာ နံရံဆေးရေးတွေကို ထုံးသုတ်မယ်၊ နံရံပေါ် မြေဖြူ မီးသွေးခဲ စတာတွေနဲ့ ပေါက်ကရလေးဆယ် စာတွေလျှောက်ရေးမယ်၊ ကွမ်းတံတွေးထွေးမယ် ၊ နှပ်ညှစ်မယ် ၊ အရုပ်ရေးမယ် ၊ ကျောမှီမယ် ၊ ချွေးအပါဝင် ပေရေနေတဲ့လက်နဲ့ ထိမယ်၊ကိုင်မယ်၊ ပွတ်မယ်၊ အလကားနေရင်း လက်သဲနဲ့ခြစ်ပြီးခွါမယ်၊ တုတ်ချောင်းနဲ့ ခြစ်မယ်၊ ဒါ့အပြင်နည်းမျိုးစုံ ရှိသေးတယ်။ မပြောလိုတော့ပါ။ နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ကဖြင့် ဒီလိုမှတ်ချက်ပေးဖူးတယ်။
The building were all covered in graffiti - mostly in Burmese language.
The locals maybe don't appreciate what they have...
Last edited by mrlynn; 01-04-2011 at 01:13 AM.
abya, Admin3, aprilcold, Bae Lu Wa, creative2020202020, eilay, fridayborn, frodofidi, jokershan, justkidding, k-pooh, KLM, kokogyi76, kosatsu, koshwemung, LoveSuju, Ma Thapyay, Mahuya, Mg Wa, MgLeo, Mini_Me, mokenlay, nelayne, NEO, orjawlan, Pho Zaw, pyinthu, RunAtServer, sai naw, Sailing, shwegonther, Tawthumalay, ttaswo, Winnermann, yarthiudu, YuNge, zero6
01-21-2011 02:16 PM #15
ရွှေဘိုနားက ရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာရှိတဲ့ ဂူဘုရားတစ်ဆူပါ။ ခြုံတွေ ကိုင်းတွေနဲ့ ပိတ်နေတဲ့အတွက် ဘုရားအောက်ခြေမှာဂူရှိမှန်းမသိသာပါ။ အတော်လေးအနီးကပ်သွားမှာသာ ဂူဝင်ပေါက်ကိုတွေ့တယ်။ ရာထောင်ချီတဲ့ ခြင်တွေကလည်းကိုက်ပါတယ်။ ခုမှစမ်းပြီးတင်ကြည့်တာ ကြည့်မရရင်ပြောပါဦး။
Last edited by mrlynn; 01-21-2011 at 02:19 PM.
abya, aprilcold, Ares, Bae Lu Wa, creative2020202020, eilay, fridayborn, happyvalley, haute, kgkalay007, KLM, KM Wai, kokogyi76, koshwemung, Mg Wa, mokenlay, MrYoDa, nelayne, NEO, orjawlan, parkye, pyinthu, RunAtServer, sai naw, Sailing, Tawthumalay, THIHA, ttaswo, Winnermann, yarthiudu, YuNge
02-03-2011 06:53 AM #16
ပျက်စီးနေပြီဖြစ်တဲ့ ပဲခူး ပါဠိဘာသာ ကလျာဏီကျောက်စာ
ကလျာဏီသိမ်၊ ကလျာဏီသိမ်ကျောက်စာ အကြောင်း ရဟန်းရှင်လူ ပညာရှိ၊ သမိုင်းပညာရှင် ၊ ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာရှင်တွေအတော်များများကရေးပြီးပြီမို့ လူတိုင်းနားယဉ်ပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်း ပြည်ပ ပါဠိဘာသာသင်ကြားရေးဆိုင်ရာကျောင်းတွေမှာ ကလျာဏီကျောက်စာ ပါဠိဘာသာဟာ လက်စွဲကျမ်းတွေထဲကတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကလျာဏီကျောက်စာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဟာ မြန်မာမှုရေးရာ၊မြန်မာ့သမိုင်းအထူးပြုသင်ကြားပြသ တဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပ တက္ကသိုလ်တွေမှာမဖြစ်မနေကိုးကားကြတဲ့ အထောက်ထားတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။
ကလျာဏီကျောက်စာ ပါဠိဘာသာကို မြန်မာဘာသာ ပြန်ဆိုကြရာမှာ လက်လှမ်းမှီသလောက်ပြောရရင်
၁။ တောင်တွင်းကြီးဆရာတော် ခင်ကြီးပျော်
၂။ တန့်ကြည်တောင် အနောက်တောင်မြင့်ရွာ သုံးထပ်ကျောင်း ဆရာတော် အသျှင်ဓမ္မစာရီ မထေရ်
၃။ ရန်ကုန်မြို့ ဘုရားဖြူတိုက် ဆရာတော် အသျှင်ရာဇိန္ဒသည် သက္ကရာဇ် ၁၃၀၀ ပြည့်နှစ်တွင် မြန်မာဘာသာနိသျှ ပြန်ဆို
၄။။ ပဲခူး ဘုရားဖြူ ဆရာတော် ( စာအုပ်အမည်- ဘုရားဖြူ ဆရာတော် ပြင်သော သာသနာပြု ပဲခူး ကလျာဏီသိမ်ကျောက်စာ ပါဠိ-နိဿယ ၊ ၁၉၃၈ ခုနှစ်၊ သုဓမ္မဝတီစာပုံနှိပ်တိုက်၊ တိုက်နံပါတ် ၅၅-၅၆ခ စစ်ကဲမောင်ခိုင်လမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။ )
၅။ ဆရာကြီး ပါရဂူ ကလည်း အတွေးမြင်စာဆောင် မှာ အခန်းဆက်အဖြစ် မြန်မာဘာသာပြန်ရေးဖူးပါတယ်။
( ခုနှစ်အတိအကျနဲ့ ကျမ်းပြု ဆရာတော်၊ လူပညာရှိတို့ကို အပြည့်စုံမဖော်ပြနိုင်သေးလို့တောင်းပန်ပါတယ်။ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောနိုင်ဖို့ရာ ဆက်ပြီးလေ့လာရပါဦးမယ်။ )
၆။ ၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၉၂ ရက်စွဲပါ ကျောက်စာဝန် တော်စိန်ခို ( Taw Sein Ko ) က Kalyarni Sima Inscription ဆိုပြီး ကလျာဏီကျောက်စာ ပါဠိဘာသာကို အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ဆိုရေးသားခဲ့တယ်။ အဲဒိစာအုပ် Cornell University Library မှာရှိတယ်။ ဒေါင်းယူချင်ရင်တော့ http://www.archive.org/details/cu31924011724808
သမိုင်းဆိုတာသုတေသနနဲ့တွဲမှခိုင်မာ ပါတယ်။ သုတေသနဆိုတာမှာ မြေထဲကတူးဖော်ရရှိတဲ့ရှေးပစ္စည်းအပါဝင် ကျောက်စာ၊မင်စာ၊ ပုရပိုဒ်စာ၊ ပေစာ ၊ ခရီးသွားမှတ်တမ်းစာ ၊ကဗျာ၊လေးချိုး၊ရတု စသဖြင့် ဂီတဆိုင်ရာမှတ်တမ်းများ ပါအချက်လက်တွေကို ပြည်တွင်းပြည်ပ ခေတ်ပြိုင်မှတ်တမ်းတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးကာမှ ကောက်ချက်ချ လေ့လာမှုဖြစ်တယ်။ ခေတ်ပြိုင်မှတ်တမ်းတွေဆိုရာမှာ ကျောက်စာ ဟာခိုင်မာမှုအရှိဆုံးအုပ်စုထဲမှာ ပါပါတယ်။ သို့သော် ကျောက်စာတိုင်းမှန်တယ်ဆိုပြီး အတည်ယူလို့တော့မရပါ။ မူရင်းမဟုတ်တဲ့ ဆင့်ထိုး၊ စပ်ထိုး ဆိုတဲ့ကျောက်စာတွေရှိတတ်တယ်။ မူလထိုးကျောက်စာဖြစ်စေကာမူ ယခင်အနှစ်တစ်ထောင်ကျော်ကအဖြစ်ပျက်ကို မှန်းဆရေးသားတာမျိုးဖြစ်နေပါက အတည်ယူရန် ခက်ခဲပါတယ်။ သုရှင်ရာဇာဓိပတိ ခေါ် ဓမ္မစေတီမင်း ( ၁၄၇၂-၉၂) ရေးထိုးခဲ့တဲ့ ကလျာဏီကျောက်စာပါဠိဘာသာဟာ မူလထိုးကျောက်စာဖြစ်စေကာမူ ကျောက်စာပါ အချို့အကြောင်းရာတွေဟာ ကမ္ဘာ့သမိုင်းလာခေတ်ပြိုင်မှတ်တမ်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုမရှိလို့ အတည်ယူလို့မရနိုင်ပါ။
" သာသနာပြုပြင်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်များကို ၂၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၈၀ ရက်စွဲဖြင့် ပဲခူးကလျာဏီသိမ်ကျောက်စာကို မွန်ဘာသာဖြင့် ကျောက်စာခုနှစ်တိုင် ( တစ်ဆယ့်လေးမျက်နှာ ) ရေးထိုးခဲ့၏။ ပါဠိဘာသာဖြင့်လည်း အကြောင်းအရာတူကို ကျောက်စာသုံးတိုင် ( ခြောက်မျက်နှာ ) ရေးခဲ့သေးသည်။ အဆိုပါ မှတ်တမ်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်ကို စ၍ရေးပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဖြစ်သော ရာမညဒေသသို့ အသောကမင်းလက်ထက် သာသနာပြုရောက်ပုံကို ပြောပြသည်။ တစ်ဆယ့်ငါးရာစုကုန်လောက် ရောက်သည့်အခါမှာ ၃၀၀ ဘီစီဖြစ်သော ယခင်က အနှစ်တစ်ထောင်ရှစ်ရာကကိစ္စကို ပြန်ပြောင်းပြောနေသဖြင့် ခြွင်းချက်မရှိ လက်ခံနိုင်ဖို့ခက်သည်။ ထို့အတူ သထုံမှ သာသနာ သည် အေဒီ ၁၀၅၇ တွင် ပုဂံသို့ရောက်ပုံကိုလည်း အပြည့်အစုံ လက်ခံနိုင်ဖို့ခက်သည်။ " လို့ဆိုတယ်။
သို့သော် အချို့သောအကြောင်းရာ နဲ့ရက်စွဲတွေကဖြင့် သီရီလင်္ကာအပါဝင် နိုင်ငံခြားမှတ်တမ်းများ ပြည်တွင်းခေတ်ပြိုင်မှတမ်းများနှင့် တိုက်ဆိုင်တူညီမှုရှိလို့ သမိုင်းမှတ်တမ်းအဖြစ်သတိကြီးကြီးထားပြီးသုံးကြပါတယ်။
ကလျာဏီ ကျောက်စာပေါင်းချုပ်ပါ အရေးပါသော ရက်စွဲတွေကတော့
၁၄၅၈။ ရာဇာဓိပတိသည် ရာမညဒေသတွင် သာသနာသန့်စင်ရေးဆောင်ရွက်ရန် ကြံရွယ် ( ကလျာ ၅၉ )
၁၄၇၅။ ရာဇာဓိပတိသည် သာသနာကို ပြုပြင်လိုက သိမ်သမုတ်ခြင်းက စတင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဟုသဘောပေါက်လျက် မောဂ္ဂလန်မဟာထေရ်အမှူးရှိသော သံဃာနှစ်ဆယ့်နှစ်ပါးတို့နှင့် တိုင်ပင် (ကလျာ ၆၆၊၆၉)
၂၁ ဇန်နဝါရီ ၁၄၇၆။ သာသနာပြုပြင်ရေးအတွက် မောဂ္ဂလန်မဟာထေရ် နှင့် ရဟန်းဆယ်ပါးသည် ရာမဒူတသင်္ဘောစီးလျက် ယောဂမြစ်ဝမှ သီဟိုဠ်သို့စထွက် ( ကလျာ ၇၂ )
၂၂ ဇန်နဝါရီ ၁၄၇၆။ သာသနာပြုပြင်ရေးအတွက် သီဝလိနှင့် ရဟန်းဆယ်ငါးပါးသည် စီတြဒူတသင်္ဘောစီးလျက် ယောဂမြစ်ဝမှ သီဟိုဠ်သို့စထွက် ( ကလျာ ၇၂)
၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၇၆။ သီဝလိမဟာထေရ်တို့ ကလမ္ဗုဆိပ်ရောက်၊ ဘုဝနေကဗာဟုမင်းကို အကြောင်းကြား ( ကလျာ ၇၂)
၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၇၆။ သီလဝိမထေရ်တို့ကို ဘုဝနေကဗာဟုမင်းကကြိုယူ။ မထေရ်တို့ အနုရာဓမြို့သို့ ဘုရားဖူးရန် ဆက်လက်ထွက်ခွါ ( ကလျာ ၇၂)
၃ မတ် ၁၄၇၆ ။ မောဂ္ဂလန် မထေရ်နှင့် ရဟန်းဆယ်ပါးတို့စီးသော သင်္ဘောသည်လေလှိုင်းမိ၍ ဆင်းရဲငြိုငြင်စွာဖြင့် သလ္လိရာဆိပ်တွင်ဆိုက်၊ ဂေါရုစီခေါင်းဆောင်သည့် သူပုန်တို့သောင်းကျန်းသောဒေသဖြစ်ခြင်းကြောင့် ခရီးမဆက်ဝံ့သဖြင့် ခေတ္တဆိုင်းငံ့နေရ ( ကလျာ ၇၃)
၇ ဧပြီ ၁၄၇၆။ မောဂ္ဂလန်အဖွဲ့ ခရီးဆက် ( ကလျာ ၇၃)
၁၃ ဧပြီ ၁၄၇၆။ မောဂ္ဂလန်အဖွဲ့ ဇယဝဋမြို့သို့ရောက်။ ဘုဝနေကဗာဟုက ကြိုယူ ( ကလျာ ၇၃)
၆ ဇူလိုင် ၁၄၇၆။ သီဝလိအဖွဲ့နှင့် မောဂ္ဂလန်အဖွဲ့ ပူးပေါင်းမိပြီဖြစ်သောကြောင့် စွယ်တော်ကို ဖူးမျှော်ရန်တိုက်ဖွင့်ပေး ( ကလျာ ၇၃)
၁၆ ဇူလိုင် ၁၄၇၆။ ရာမညလာရဟန်းတို့ကို လူဝတ်လဲ၍ သာမဏေဝတ်စေပြီးမှ မထေရ်ငါးပါးကို ဦးစွာရဟန်းခံ၍ပေး ( ကလျာ ၇၄)
၁၇ ဇူလိုင် ၁၄၇၆။ နောက်ထပ်ဆယ်ပါး ရဟန်းခံ ( ကလျာ ၇၅)
၁၈ ဇူလိုင် ၁၄၇၆။ နောက်ထပ် ခုနှစ်ပါး ရဟန်းခံ ( ကလျာ ၇၅)
၁၉ ဇူလိုင် ၁၄၇၆။ မူလဆရာတော်နှစ်ဆယ့်နှစ်ပါးတို့၏ တပည့်နှစ်ဆယ့်နှစ်ဦးတို့ ရဟန်းခံ ( ကလျာ ၇၅ )
၃ စက်တင်ဘာ ၁၄၇၆။ သီဟိုဠ်မှပြန်ခဲ့သည့် မောဂ္ဂလန်အဖွဲ့ ယောဂမြစ်ဝသို့ဝင်၊ တဂုံမှာ ခေတ္တနားရန် ရာဇာဓိပတိကစီမံ ( ကလျာ ၇၇)
၂၅ စက်တင်ဘာ ၁၄၇၆။ ရွှေတိဂုံမှာ ခေါင်းလောင်းကြီးလှူရန် ရာဇာဓိပတိ ပဲခူးကထွက် ( ကလျာ ၈၀)
၃၀ စက်တင်ဘာ ၁၄၇၆။ တဂုံသို့ရောက်နှင့်ပြီးသော သီဟိုဠ်ပြန်မောဂ္ဂလန်အဖွဲ့ကို ရာဇာဓိပတိက ရွှေတိဂုံကုန်းသို့ပင့် ၍ဆွမ်းကပ် (ကလျာ ၈၀)
၂အောက်တိုဘာ ၁၄၇၆။ အချိန်သုံးထောင်ရှိ ခေါင်းလောင်းကြီးကို ရွှေတိဂုံမှာ ရာဇာဓိပတိကဆွဲလှူ ( ကလျာ ၇၇၊၈၀)
၃ အောက်တိုဘာ ၁၄၇၆။ တဂုံရှိ သံဃာကုန်ကို ရာဇာဓိပတိက ဆွမ်းကပ် ( ကလျာ ၈၀)
၆ အောက်တိုဘာ ၁၄၇၆။ ရာဇာဓိပတိ ပဲခူးသို့ပြန် ( ကလျာ ၈၀)
၁၀ အောက်တိုဘာ ၁၄၇၆။ ရာဇာဓိပတိ ပဲခူးသို့ရောက် ( ကလျာ ၈၀)
၁၂ အောက်တိုဘာ ၁၄၇၆။ သီဟိုဠ်ပြန်မထေရ်တို့နှင့် တိုင်ပင်လျက် သိမ်သစ်သမုတ်ရမည့်နေရာကို ရွေးချယ်ရာ နရသူရအမတ်၏ ကကွမ်းသီးခြံ၏အနီးရှိ မြေကွက်ကိုတွေ့ရှိ၍ အကြိုက်ညီသဖြင့် ထိုနေရာ၌ သိမ်သမုတ်ရန် ပြင်ဆင် ( ကလျာ ၈၄)
၂၃ နိုဝင်ဘာ ၁၄၇၆။ သိမ်သစ်သမုတ်၍ ကလျာဏီသိမ်ဟု အမည်ပေး ( ကလျာ ၈၄၊၉၄၊ ၉၈ )
၂၄ နိုဝင်ဘာ ၁၄၇၆။ သိမ်သစ်မှာ ရဟန်းခံမည့်သူများကို သုဝဏ္ဏသောဘဏမထေရ်က ဥပဇ္ဇျာယ်ပြု၍ အကြိမ်ကြိမ် ရဟန်းခံပွဲများစလုပ် ၊ ရဟန်းခံပွဲများမှာ အစုစုသုံးနှစ်ကြာ၊ ရဟန်းကြီးအပါ ၈၀၀၊ ရဟန်းငယ် ၁၄၂၆၅ ပါး ရဟန်းခံပြီး ( ကလျာ ၈၈၊၉၂)
၂၇ နိုဝင်ဘာ ၁၄၇၆။ ရာမညဒေသ တစ်ဝန်းနေရာများစွာ၌ သိမ်သစ်များ သမုတ်ရန် လုပ်ငန်းစ (ကလျာ ၉၅)
၃၀ နိုဝင်ဘာ ၁၄၇၆။ ရဟန်းသစ် ၂၄၅ ပါးကို ရာဇာဓိပတိက ဆွမ်းကျွေး။ နောင်အခါ ရဟန်းသစ်ကို လက်ခံသောအခါ မည်သို့သောသဘောများ ပြည့်စုံပါစေဟု မင်းက သံဃာအပေါင်းအား ပန်ကြား (ကလျာ ၈၉)
၁၅ ဧပြီ ၁၄၇၇ ။ သီဟိုဠ်မင်းဘုဝနေကဗာဟု၏ အပြန်လက်ဆောင်ကို စောင့်ကြိုယူနေရသော စိတြဒူတ သင်္ဘောစီး သီဝလိမထေရ်ခေါင်းဆောင်သောအဖွဲ့သည် သင်္ဘောထွက်စ မုန်တိုင်းမိ၍ သင်္ဘောပျက်၍ ဖောင်ဖြင့် တောင်အိန္ဒိယရှိ နာဂပဋဆိပ်သို့ရောက်။ ထိုဆိပ်မှ ပြန်လည်ထွက်ခွါလာသော အခါ တစ်ပေါင်းတည်းသင်္ဘောနေရာမရသဖြင့် အကွဲကွဲစီးရ ( ကလျာ ၇၉)
၂၄ ဧပြီ ၁၄၇၇။ တစ်ပါးတည်းထွက်လာသော စူဋ္ဌဘယတိဿမထေရ် နာဂရာဇ်ဝရောက် (ကလျာ ၇၉)
၈ မေ ၁၄၇၇။ သီဟိုဠ်ပြန်မထေရ်သုံးပါး ကုသိမ် (ပုသိမ်) ရောက် (ကလျာ ၇၉)
၁၂ မေ ၁၄၇၇ ။ အဆိုပါ မထေရ်သုံးပါး ကုသိမ် (ပုသိမ်) ရောက် (ကလျာ ၇၉)
၁၅ မေ ၁၄၇၇။ စူဋ္ဌဘယတိဿ ကုသိမ်ရောက် (ကလျာ ၇၉)
၂၂ ဇွန် ၁၄၇၇။ မထေရ်လေးပါးပေါင်းလျက် ပဲခူးရောက် (ကလျာ ၇၉)
၂၃ ဩဂုတ် ၁၄၇၇။ ကလျာဏီစေတီဌာပနာ၍ ကလျာဏီဗောဓိပင်စိုက် (ကလျာ ၉၉)
၁၅ စက်တင်ဘာ ၁၄၇၉။ သီဟိုဠ်မှပြန်လာသော ရဟန်းအချို့ သင်္ဘောပျက်၍ တောင်အိန္ဒိယသို့ရောက်ရှိနေကြပြီးမှ မင်္ဂလမထေရ်နှင့် ရဟန်းငါးပါးတို့ ကောမလဆိပ်မှ ရာမညသို့ ပြန်ရန်ထွက် ( ကလျာ ၇၉)
၁၅ အောက်တိုဘာ ၁၄၇၉။ မင်္ဂလမထေရ်တို့စီးသော သင်္ဘော နာဂရာဇ်ဝရောက် (ကလျာ ၇၉)
၂၅ အောက်တိုဘာ ၁၄၇၉။ မင်္ဂလမထေရ်တစ်ပါးသာ ကုသိမ်ရောက်၊ ကျန်ငါးပါး လမ်းမှာလွန် (ကလျာ ၈၀)
၂၈ အောက်တိုဘာ ၁၄၇၉။ မင်္ဂလမထေရ် ပဲခူးရောက် (ကလျာ ၈၀)
၂၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၈၀။ ရာဇာဓိပတိ ရဟန်းတကာခံသည့် ကလျာဏီသိမ်၌ ရဟန်း၆၀၀ ရဟန်းခံပွဲစ ( ကလျာ ၁၀၂၊ ၁၀၄)
၂၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၈၀။ ရဟန်း ၆၀၀ ရဟန်းခံပွဲစ (ကလျာ ၁၀၄)
၂၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၈၀ ။ ရဟန်းသစ်တို့ကို ဆွမ်းကျွေး၊ အထူးထူးသော လှူဖွယ်ပစ္စည်းတို့ကို ပေးလှူ (ကလျာ ၁၀၄)
ဒီနေရာမှာအဓိကပြောချင်တာက လက်ရှိကလျာဏီကျောက်စာရဲ့လက်ရှိအခြေနေဖြစ်ပြီး ကျောက်စာပါအကြောင်းရာနဲ့ သမိုင်းကြောင်းကိုတော့ နောက်မှသီးသန့်ပြောတာကောင်းပါမယ်။
ကလျာဏီသိမ် ပါဠိကျောက်စာပါ ရက်စွဲများသည် စီအို ဗလက်ဒန် ဖတ်သော မွန်ကျောက်စာပါ ရက်စွဲများနှင့် မတိုက်ဆိုင်ပါ။ သို့ပါ၍ ဆက်လက်သုတေသနပြုဖို့လိုပါသေးသည်။ သုတေသနပြုရာမှာ အဓိကအရေးအပါဆုံးမှာ မူရင်းဇစ်မြစ် အထောက်ထား ( Primary Source )ဖြစ်ပါတယ်။ ပေထက်အက္ခရာ ၊ ပုံနှိပ်စာအုပ် စသဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ပြီးဖြစ်စေကာမူ အဓိကသမိုင်းဝင် ရှေးကျောက်စာတိုင်မူရင်းကိုတော့ဖြင့် မပစ်ပယ်စကောင်းပါ။ ဒါဟာ ယဉ်ကျေးမှုအမွေ ၊ သမိုင်းဝင် ရှေးပစ္စည်း ၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနအတွက် အရင်းမူလလေ့လာဖွယ်ရာ အထောက်ထားဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်စာရုံကိုရောက်သွားချိန်မှာတော့ ထုံးစံအတိုင်း သော့ခတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အတွင်းပိုင်းကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါ အကျိုးပဲ့တွေကိုဆက်ပြီးထောင်ထားတဲ့ အရွယ်စားခပ်ကြီးကြီးကျောက်စာတိုင် တစ်တိုင်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒိနောက်မှာတော့ အပိုင်းပိုင်းကျိုးပဲ့နေတဲ့ ကျောက်တုံးတွေအဖြစ်တွေ့ရတယ်။ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ လူမြင်ကောင်းအောင် အပေါက်ဝနဲ့နီးတဲ့နေရာက ကျောက်စာတိုင်ထောင်ထားကလွဲပြီး ကျန်တာတွေကအကျိုးအပဲ့တွေဖြစ်နေပါပြီ။ အရွယ်စားကြီးငယ်အလိုက် မြေပြင်ပေါ်ပြန့်ကျဲနေတဲ့ ကျောက်စာအပိုင်းစတွေကိုတွေ့ရတယ်။ နံရံနားကပ်ပြီးပုံထားတဲ့ အကျိုးပဲ့တွေပေါ်မှာတော့ ရှေးလက်ရေးမူနဲ့ ရေးထားတဲ့ ပါဠိစာတွေကိုမြင်ရတယ်။
" ထိုကျောက်စာကို ပါဠိဘာသာ၊​ မွန်ဘာသာတို့ဖြင့် ရေးထိုးထားသည်။ ​ကျောက်စာတိုင်အမြင့် ၇ ပေ၊ အကျယ် ၄ ပေ ၂ လက်မ၊​ထု ၁ ပေ ၃ လက်မ၊ ၂ မျက်နှာစီရေး။ တစ်မျက်နှာလျှင် စာကြောင်းရေ ၇၀ ရှိ၍ တစ်လက်မအလျားတွင် စာလုံး ၃ လုံးစီဝင်အောင် ရေးထိုးထားသည်။ မြောက်ဘက် ကျောက်စာတိုင် ၃ ချပ်တွင် ပါဠိဘာသာကို မြန်မာအက္ခရာဖြင့် ရေးထိုးသည်။ တောင်ဘက် ကျောက်စာတိုင် ၇ ချပ်တွင် ပါဠိဘာသာ ​ကျောက်စာ ၃ ချပ်၏ အဓိပ္ပာယ်ကို မွန်ဘာသာဖြင့် ရေးထိုးထားသည်။ ထိုကျောက်စာများကို ကမ္ဗည်း​ကျောက်စာဌာနမှ ကျောက်စာရုံ ဆောက်လုပ်ကာ စောင့်ရှောက်သိမ်းဆည်းထားသည်။ " လို့ဖတ်ရတယ် ဘယ်တုန်းကအခြေနေကိုပြောလဲဆိုတာ သေချာမသိပါ။ သို့သော် ၂၀၁၀ ကအခြေနေကတော့ ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမြင်ရတယ်။ ခုလို လုံးပါးပါးပြီးပျောက်ပျက်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှေးဟောင်းသုတေသန ဌာနရဲ့ ကြီးမားတဲ့တာဝန်မဲ့မှုတစ်ရပ်သာဖြစ်ပါမယ်လို့ ပြောချင်ပါရဲ့။
ဒီနှစ်ထဲ နောက်တစ်ခေါက် ပဲခူးသွားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ သထုံမြို့ ရွှေစာရံစေတီတော်ကြီး အရှေ့တောင်ဘက် ကလျာဏီသိမ်စနေထောင့် မှာ သထုံကလျာဏီကျောက်စာ မွန်ဘာသာ ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ မရောက်ဖူး မမြင်ဖူးသေးလို့အခြေနေမသိရသေးပါ။ ကျုပစ်မောင်/မယ်များ လမ်းကြုံရင် ဒုံပါတ်ရိုက်ပြီးတင်ပေးကြပါလားခင်ဗျာ။
ပဲခူးကလျာဏီသိမ် နောက်ဘက်ကိုသွားတဲ့အခါလှမ်းမြင်နေရတဲ့ ကျောက်စာရုံ
အဝင် တံခါးမကြီးနဲ့အနီးဆုံးအနေထားမှာ ထောင်ထားတဲ့ ကလျာဏီကျောက်စာ ပါဠိဘာသာ
ကျိုးပဲ့နေတဲ့ ကျောက်စာအပိုင်းစပေါ်က ပါဠိဘာသာစာ
ကျိုးပဲ့နေတဲ့ ကျောက်စာအပိုင်းစများ ဘေးမြင်
ပါဠိဘာသာ ပဲခူးကလျာဏီကျောက်စာရုံ ဘေးမြင်
Last edited by mrlynn; 02-03-2011 at 11:55 AM.
abya, aprilcold, creative2020202020, eilay, fridayborn, jokershan, k-pooh, KLM, KM Wai, kokogyi76, koshwemung, Mg Wa, Mi Soe, mokenlay, Monay, MrYoDa, nelayne, orjawlan, Peacock D. NgaPyae, pyinthu, RunAtServer, sai naw, Sailing, Tawthumalay, tiptop, ttaswo, tuppi2p2p, Winnermann, yarthiudu, YuNge, ZAM
02-08-2011 01:47 PM #17
Photo by Saw Thet Lin @ http://sawthetlin.blogspot.com/
ခုမြင်နေရတဲ့ ကျောက်စာကျိုးအပိုင်းစနှစ်ခုပုံကို ဘလော့ဂါ ကိုစောသက်လင်းမှ ကျေးဇူးပြုပါတယ်။ (၁၈-၁၂-၂၀၁၀) စလေမြို့ ရုပ်စုံကြောင်းရောက်စဉ်ရိုက်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတ ယ်။ ဘယ်နေရာမှာ ဘာတွေ့တယ်ဆိုတာအမြဲနားစွင့်နေရတဲ့ ကျွန်တော့အတွက်တော့ ဓာတ်ပုံတွေရဲ့တန်ဖိုးက ကြီးမားလှပါတယ်။ ကိုစောသက်လင်းကို ကျေးဇူးအထူးတင်တယ်လို့ ဒီနေရာမှာဆိုပါရစေ။
စလေရုပ်စုံကျောင်းကို ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနက စောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ပန်းပုလက်ရာ ၊ ဗိသုကာလက်ရာ ၊ လက်သမားပညာ ၊ လက်မှုပညာစတာတွေကို တပေါင်းတည်းလေ့လာလို့ရတဲ့အပြင် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ကျောက်စာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှာ နိုင်ငံခြားသားတို့ စိတ်ဝင်တစားသွားရောက်တတ်တဲ့ နေရာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်လာပါပြီ။ Flickr.com မှာကြည့်ရတဲ့ ပုံတချို့ရယ် ၊ မိတ်ဆွေတချို့ ကျေးဇူးပြုတဲ့ပုံတွေသာကြည့်ဖူးပြီး လူကိုယ်တိုင်မရောက်ဖူးသေးပါ။
ခုမြင်နေရတဲ့ ကျောက်စာကျိုးအပိုင်းစနှစ်ခုကို တောင်သူတွေရဲ့ ယာထဲကရရှိတာဖြစ်ပြီး ရုပ်စုံကြောင်းကို ပေးပို့ထားရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ရှေးဟောင်းသုတေသနဌာနက စာရင်းသွင်းပြီးပြီလား၊ အစီရင်ခံစာထုတ်ပြီးပြီလားဆိုတာမသိရသေးပါ။ ပေါက်ပြားစာမိထားပုံပေါ်တဲ့ ကျောက်စာဟာ အတော်လေးပျက်စီးနေပြီဖြစ်ပေမယ့် ကြိုးစားဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ရနိုင်ကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်ကြိစားဖတ်သော်လည်းဘဲ ခုချိန်ထိဖတ်မရပါ။ ခြောက်ကြောင်းမြှောက်မှာစာတန်းမှာ " ဂြီ " လို့ထင်ရတဲ့ စာလုံးတစ်လုံးတွေ့တယ်။ ခုနှစ်ကြောင်းမြှောက်မှာလည်းထပ်တွေ့တယ်။ ပုဂံခေတ်ရေးဟန်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိတိကျကျပြတ်ပြတ်သားသားမြင်ရတာမျိုးမဟုတ်လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မပြောနိုင်သေးပါ။ ရှေ့ဆက်လေ့လာရပါဦးမယ်။ မိတ်ဆွေတို့လည်းဖတ်လို့ရတယ် အဖိုးတန်အချက်လက်တွေရှိတယ်ဆိုရင်ဖြင့် အသိပေးပါဦး။ ပညာယူချင်လို့ပါ။ ဒီကျောက်စာနှစ်ချပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး High Resolution ပုံတွေရှိရင်ဝေမျှပါဦး။
abya, eilay, fridayborn, jokershan, justkidding, KLM, KM Wai, kokogyi76, koshwemung, Mg Wa, mokenlay, MrYoDa, Ne Ou, nelayne, orjawlan, Peacock D. NgaPyae, pyinthu, RunAtServer, sai naw, Sailing, Tawthumalay, thatonthu, THIHA, ttaswo, Winnermann, yarthiudu, YuNge
02-08-2011 03:45 PM #18
Thanked 13,541 Times in 865 Posts
အကို့ ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာ ဘုရားဆင်းတုတော်တော်များများက ဦးခေါင်းပြတ်နေကြတာတွေကြီးပဲတွေ့ရတယ်ဗျာ
ဒါဟာ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းမှောင်ခိုသမားတွေရဲ့လက်ချက်ထင်တယ်နော်
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆင်းတုတော်အားလုံး ခေါင်းပိုင်းပဲ ရွေးပြတ်နေတာတော့ မဖြစ်တန်ရာဘူးလို့ ထင်မိကြောင်းပါ
ကျနော်သိတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ဗျ ... သူများတွေကသူ့ကိုပြောကြတာတော့ အဲ့လို ရှေးဟောင်းပစ္စည်းနဲ့ ရှေးဟောင်းဘုရားဆင်းတုတော်တွေ မှောင်ခိုလုပ်တာတဲ့ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်ကြီးဗျ
ဟုတ်မဟုတ်တော့ ကျနော်လည်းသေခြာမသိပါဘူး တခြားသူငယ်ချင်းတွေပြောလို့ကျနော်လည်း ကြားတာ ။ တော်တော်လေးကိုချမ်းသာတယ် ။
နောက်ပြီး သူက မန်းတလေး တိုင်းအဆင့် ကြံ့ဖွတ်ထဲက အကောင်ကြီးကြီးတယောက်ပဲ
cspfjcif;arwÅmu toufu,faq;awGeJY &Sifoefae&csdefrSm trkef;awGu tnGefYwvlvlwufvdkY /
abya, aprilcold, BamarBlood, eilay, fridayborn, jokershan, justkidding, KLM, KM Wai, kokogyi76, kosatsu, koshwemung, Mg Wa, mokenlay, mrlynn, MrYoDa, nelayne, pyinthu, RunAtServer, sai naw, Sailing, thatonthu, tiptop, ttaswo, Winnermann, yarthiudu, YuNge
02-09-2011 05:15 AM #19
နာမည်နဲ့လူနှင့်လိုက်ပဗျာ ၊ အကို့ကွန်မန့်ကိုဖြေမိရင် ကျနော်အိမ်ပြန်လို့ရမယ်မထင်ဘူး။ ဒုတ်ခ ရောက်ရချည်ရဲ့ဗျာ။
ပုဂံ ၊ မန်းလေး ၊ ရန်ကုန်၊ ကျိုင်းတုန်၊ မြဝတီ စသဖြင့်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ တတ်နိုင်သလောက်စားရင်းလေးလုပ်ထားတာရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်ကလူဆိုရင် နာမည်ကျော် ဝင်ဒါမီယာလိုနေရာမျိုးမှာ အတော်ကိုကြီးမားတဲ့ အိမ်ကြီးနဲ့ပါ။ ဒါပေသိ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ဘာညာ မပြောပရစေနဲ့ ဗျာ၊ နော် ကိုယ့်ဖာကိုယ်အေးအေးနေတာကောင်းပါတယ်၊ အိမ်ပြန်တဲ့အခါ ဒုတ်ခရောက်မှာကြောက်ပါတယ်။
ကျနော်ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာ တချို့နေရာတွေက ဘုရားခိုးဂိုဏ်းတွေရောက်ပြီးသားလို့ထင်တယ်။ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်တစ်ပါး ပြောပြချက်အရ ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင် ရုပ်ပွါးတော်ကြီးအခိုးခံရတယ်တဲ့၊ ခိုးသွားတဲ့လူက ဘုရားဆင်းတုတော်ပေါ်မှာ ကပ်လှူပူဇော်ထားတဲ့ အဖိုးတန်ရတနာတွေကိုခွါယူပြီး လယ်ကွင်းတစ်နေရာမှာ ကောက်ရိုးတွေနဲ့ အုပ်ထားခဲ့တယ်၊ ကွင်းပြင်နေရာဖြစ်နေတော့ ကြက် ငှက်တွေကြောင့်ရယ် လေတိုက်တာရယ်ကြောင့် ကောက်ရိုးပုံထဲက ပြန်ပေါ်လာတာကို ရွာသားတစ်ယောက်ကတွေ့လို့ ကျောင်းပြန်သယ်ရတဲ့အဖြစ်မျိုးရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။
အခု ဗီဒီယိုကလစ်ထဲက ဘုရားပျက်ဟာ အဲဒိဆရာတော်ကျောင်းနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာရှိတယ်။ အရွယ်စားငယ် သာမန်ကျောက်ဖြူသား (Alabaster )ဆင်းတုတော် လေးတွေကဖြင့် မတော်တဆထိခိုက်မိပြီးကျိုးတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ် ။ လိုက်ပို့တဲ့အရာရှိတစ်ယောက်ပြောပြချက်အရ ရန်လိုတတ်တဲ့ ဘာသာခြား ဆိတ်ကျောင်းသား၊ နွားကျောင်းသားတချို့က ဒီလိုအရွယ်စားငယ် ကျောက်ဖြူဆင်းတုတော်လေးတွေကို ခေါင်းရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခဲ့တတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ အရွယ်စားခပ်ကြီးကြီးဆင်းတုတော်တွေပါ ပါတတ်လို့ သတင်းပို့တဲ့အတွက် ဖမ်းမိတာမျိုး၊ အမှုဖွင့်တာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျိုးသွားတဲ့ ခေါင်းတချို့ အနီးနားမှာတင်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ( ကျနော်ရိုက်ယူထားတဲ့ ဖျက်ဆီးခံဆင်းတုတော် ပုံတွေရှိပါတယ် သို့သော် ဒီအကြောင်း ဒီမှာတင် ရပ်တာ ကောင်းပါတယ် )
ဘုရားခိုးဂိုဏ်း တွေရဲ့အဓိကပစ်မှတ်က လက်ရာကောင်းကောင်း အရွယ်စားကြီးကြီး ဆင်းတုတော်တွေဖြစ်တယ်။ မင်းဝတ်ဘုရားဆို ရတနာတွေပါတတ်လို့ သူတို့အတွက်နံပါတ်တစ် ပစ်မှတ်လို့ဆိုမလားဘဲ။ သိသလောက်ပြောရရင် မုဆိုးက သားကောင်ကို လိုက်သလိုမျိုး ဖြစ်ပြီး သူတို့ပစ်မှတ်တွေက
၁။ မံဘုရား ( ပေါ့ပါးပြီး သယ်ယူပို့ဆောင်ရ ပေါ့ပါးလွယ်ကူ )
၂။ သစ်သား ဆင်းတု ( လက်ရာကောင်း ၊ သယ်ယူရာမှာ လွယ်ကူ၊ လူကြိုက်များ ၊ သက်တမ်းမှန်းဆရန်လွယ်ကူ )
၃။ ကြေးသွင်းဘုရား ( အလေးချိန်ရှိသော်လည်း သယ်ယူရာမှာ အကြမ်းခံ ၊ အထိခိုက်ခံ ၊ လူကြိုက်များ )
၄။ ကျောက်စစ်ဘုရားဆင်းတု ( သဲကျောက်နဲ့ ထုဆစ်ထားတာမျိုးဆိုရင်ဖြင့် ရှားပါးတဲ့အတွက် လူကြိုက်များ၊ ပုဂံခေတ်လက်ရာတွေသာများပါတယ်၊ ရခိုင်ဘက်မှာသာအတွေ့ရများတယ်၊)
၅။ ကျောက်ဖြူသားဆင်းတု ( ကျောက်ဖြူသားဟာ ဘုရားခိုးဂိုဏ်းတွေရဲ့ နောက်ဆုံး ပစ်မှတ်ဖြစ်တယ်၊ အကြမ်းမခံ၊ ထိခိုက်ကျိုးပဲ့လွယ်ပြီး ပျက်စီးခဲ့သော် မူလအတိုင်းဖြစ်အောင်ပြုပြင်မှု(Restoration) လုပ်ရာမှာ အခက်ဆုံး၊ ဈေးအနည်းဆုံး )
ဒါကြောင့် စကျင်ကျောက်ခေါ် ကျောက်ဖြူသားဆင်းတုဟာ ဘုရားခိုးဂိုဏ်းတွေရဲ့ အကြိုက်အနည်းဆုံးဖြစ်နေတယ်။ သူတို့အခေါ် အော်ဒါတက်လာတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ် ဈေးကွက်ထဲမှာ ရှားပါးလာတဲ့အခါမှသာ ဦးစားပေးခိုးယူတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ကျောက်ဖြူဆင်းတုတော်တွေဆို အများအားဖြင့်ခေါင်းချိုးယူသွားတာများပါတယ်။
Last edited by mrlynn; 02-09-2011 at 05:18 AM.
abya, aprilcold, BamarBlood, eilay, fridayborn, jokershan, k-pooh, KLM, KM Wai, Ko Khant, kokogyi76, kosatsu, koshwemung, Ma Thapyay, Mg Wa, mokenlay, MrYoDa, nelayne, orjawlan, pauksi, Pho Zaw, pyinthu, RunAtServer, sai naw, Tawthumalay, thatonthu, THIHA, ttaswo, Winnermann, yarthiudu, YuNge, ZAM
02-11-2011 01:18 PM #20
လိုက်ပို့တဲ့အရာရှိတစ်ယောက်ပြောပြချက်အရ ရန်လိုတတ်တဲ့ ဘာသာခြား ဆိတ်ကျောင်းသား၊ နွားကျောင်းသားတချို့က ဒီလိုအရွယ်စားငယ် ကျောက်ဖြူဆင်းတုတော်လေးတွေကို ခေါင်းရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးခဲ့တတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ အရွယ်စားခပ်ကြီးကြီးဆင်းတုတော်တွေပါ ပါတတ်လို့ သတင်းပို့တဲ့အတွက် ဖမ်းမိတာမျိုး၊ အမှုဖွင့်တာမျိုးလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကျိုးသွားတဲ့ ခေါင်းတချို့ အနီးနားမှာတင်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ( ကျနော်ရိုက်ယူထားတဲ့ ဖျက်ဆီးခံဆင်းတုတော် ပုံတွေရှိပါတယ် )
ခုမြင်ရနေရတဲ့ ဆင်းတုတော်ဟာ ပြိုပျက်နေတဲ့ဘုရားပျက်တွေထဲကတစ်ခုအပါဝင်ပါ။ လူသူအရောက်ပေါက်နည်းတဲ့နေရာမှာပါ။ ဒီနေရာမှာ ဘုရားပျက်တွေရှိမှန်းသိလို့ သွားတာမျိုးမဟုတ်ပါ။ အပျင်းပြေ ဆိုင်ကယ်လျှောက်စီးရင်းမတော်တဆတွေ့တာပါ။ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ မှောင်ရီပျိုးပြဖြစ်နေတဲ့အတွက် နောက်တစ်နေ့မနက်မှာထပ်သွားရတယ်။ ခုမြင်ရနေရတဲ့ ဆင်းတုတော်ကို အဝေးကလှမ်းကြည့်တဲ့အခါ ကျိုးနေမှန်းမသိသာပါ။ အက်ကွဲကြောင်းလား ကျိုးနေတာလားသေချာသိချင်လို့ လက်နဲ့ထိကိုင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ တင်ယုံသာတင်ထားတဲ့ခေါင်းတော်ဟာ ရုတ်တရက်မြေပေါ်လိမ့်ကြသွားလို့ အလန့်ထညက်ဖြစ်ရသေးတယ်။
အနီးကပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့ လက်တော် နှင့် ခေါင်းကျိုးနေပြီဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။ အရွယ်စားပိုငယ်တဲ့ ဆင်းတုတော်တစ်ဆူက နောက်မှာကပ် တွေ့ရတယ်၊ ခေါင်းကလွဲပြီးအကောင်းပကတိ ၊ ကျိုးနေပြီဖြစ်တဲ့ခေါင်းက မြေပြင်ပေါ်မှာ။ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူလာခဲ့ပေမယ့် အဲဒိပုံလောလောဆယ်ရှာမရ။
အင်းဝ ခေတ်နှောင်းပိုင်းလက်ရာဟန်ပြစ်ပြီး ၁၈ ရာစုလက်ရာလို့ခန့်မှန်းပါတယ်။
Last edited by mrlynn; 02-11-2011 at 01:32 PM.
abya, aprilboy, aprilcold, Bae Lu Wa, jokershan, KM Wai, kokogyi76, kosatsu, koshwemung, Ma Thapyay, mokenlay, MrYoDa, nelayne, orjawlan, pyinthu, RunAtServer, Tawthumalay, ttaswo, Winnermann, yarthiudu, YuNge, ZAM